I-TuLotero yethula uhlelo lwayo olusha olulindelwe ku-Google Play | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 02/06/2021 10:00 | Kubuyekezwe ku- 31/05/2021 11:37 | Aplicaciones
I-TuLotero isizibekile selokhu yazalwa ngo-2014 njengomhlinzeki omkhulu we-inthanethi wamalotho futhi edonsela eSpain, ngakho-ke nezinkampani ezinkulu ekugcineni ziguqule zaya kufomethi yedijithali yeTuLotero ngisho neLottery kaKhisimusi ebanjwa cishe njalo ngonyaka ngokomkhosi.
Uhlelo olusha lwe-TuLotero selwethulwe ku-Google Play Isitolo ukusinikeza umuzwa ophelele ozokuvumela ukuthi uphathe iLotto yakho kunanini ngaphambili. Ama-novelties aqokonyiswe ngokushesha ngenxa yomklamo wawo omuhle, enikeza isipiliyoni esiphelele ngokuphelele futhi esenzelwe umuntu ukuphatha ilotho yethu yonke.
1 Uhlelo lokusebenza olwenziwe kabusha olulindelwe abasebenzisi
2 Izinzuzo zohlelo lokusebenza lwe-TuLotero
3 Dlala ku-TuLotero bese uthola i- € 1 MAHHALA
Uhlelo lokusebenza olwenziwe kabusha olulindelwe abasebenzisi
Uhlelo lokusebenza lwe-TuLotero lutholakala ngokuphelele ku-Google Play Isitolo kumadivayisi we-Android, lapho ekugcineni ithatha indawo yenguqulo yeLite yeTuLotero ukuthi kuze kube manje ibitholakala futhi ibinamandla amancane kakhulu. Uhlelo lokusebenza ngohlobo lwalo lwe-Lite luvumeleke kuphela ukugcina amathikithi futhi lubone imiphumela, lapho kudingekile ukulanda i-.APK kuwebhusayithi yeTuLotero.
Landa i-TuLotero ku-Google Play
Uma une-iPhone, iyatholakala ku-App Store.
Manje, ukuzivumelanisa nezinqubomgomo ezintsha ze-Google, I-TuLotero ivuselelwe ukunikela ngohlobo oluphelele lohlelo ongalulanda mahhala, hhayi kuphela ku-Google Play Isitolo, kodwa futhi iyatholakala ku-iOS App Store nakuGalari Yezinhlelo Zokusebenza zeHuawei.
Lapho yethulwa, Uhlelo lokusebenza lwe-TuLotero lukwazile ukungena kwi-Top 6 yezinga lohlelo lokusebenza lomhlaba naku-Top 2 yokuzijabulisa ngaphakathi kwe-Google Play Isitolo, ngokwamukelwa okuphezulu ngabasebenzisi abayinikeze isilinganiso sezinkanyezi ezi-4,8 kwezingu-5 ezivela ohlelweni lokuhlola lweGoogle, okufakazela ukusebenza okuhle nokuhlanganiswa okuhle kwesixhumi esibonakalayo somsebenzisi manje esinikeza iTuLotero.
Ngale ndlela, ukuhlanganiswa ngokuphelele ku-Google Play Isitolo nakwezinye izitolo ezithandwa kakhulu emhlabeni, uzokwazi ukuthola izibuyekezo ezingaguquguquki futhi ugcine uhlelo lokusebenza njalo kunguqulo yakamuva, Lokhu kuzoba ukuphepha okubaluleke kakhulu, yingakho kusuka ku-Actualidad Gadget sikunxusa ukuthi usheshe ukulanda i-TuLotero esitolo sakho sohlelo lokusebenza olithandayo ukuze ukwazi ukusebenzisa ngokugcwele amandla lokhu kuhlanganiswa okuphelele okunikeza abasebenzisi be-TuLotero.
Izinzuzo zohlelo lokusebenza lwe-TuLotero
Uhlelo lokusebenza lusenguqulo edidiyelwe yamakhono we iwebhusayithi ye-TuLotero kepha ihlanganiswe ngokuphelele entendeni yesandla sakho. Yingakho manje uzokwazi ukudlala ngasikhathi sinye kusuka kufoni yakho ephathekayo nakukhompyutha yakho, lapho ikufanele ngaso sonke isikhathi. Njengokwengeza, Uzokwazi ukusizakala ngokuthi uhlelo lokusebenza lukhululekile ngokuphelele, alunamakhomishini futhi izaziso zohlelo lokusebenza zizokuvumela ukuthi wazi imiphumela yemidlalo yakho khona manjalo Uma uceba ngeTuLotero uzokwazi ngaphambi kwanoma ngubani omunye, awucabangi ukuthi kuyinzuzo?
Ukusebenzisa i-TuLotero kuzokuvumela futhi ukuthi wabelane ngethikithi nabangani bakho ababhalisiwe ngokuchofoza okukodwa, ngendlela efanayo naleyo awusoze walahlekelwa ithikithi lakho, Ngeke kudingeke ukuthi ulifihle lelo thikithi lokuwina eliyigugu, kuzokwanela ukufaka iTuLotero ngoba ithikithi belihlotshaniswa nefoni yakho ephathekayo.
Njengenjwayelo, uzokwazi ukuqhubeka nokuthenga amathikithi akho, ubambe iqhaza emaqenjini nasemakilabhini ngokushesha, wakhe amaqembu afika kwabangu-100 azodlala ndawonye, ​​alayishe ibhalansi kulelo qembu elibuzwayo. Ngaphezu kwalokho, iTuLotero iphephe ngo-100%, ngoba ukubheja kucutshungulwa ngabaphathi abasemthethweni benethiwekhi yeLottery and Betting, ngakho-ke amathikithi akho ayefana nalawo athengwe ephepheni.
Ngale ndlela, ungakhokhisa amathikithi akho ngaphandle kwamakhomishini futhi ngokushesha ngqo kwi-akhawunti yakho yasebhange, ngakho-ke kuqinisekiswa ukungaziwa, esinye isinyathelo sokuphepha okufanele usicabangele. Ngaphezu kwe-500 Spanish Lottery Administrations sekuvele kuhlotshaniswa ne-TuLotero futhi kuzokuvumela ukuthi udlale izinombolo zakho ozithandayo ngokubhalisela zona ngokuzenzakalela, kanye nokuthuma abaphathi beKhisimusi Lottery njengoba izinkampani ezinkulu sezivele zenza.
Dlala ku-TuLotero bese uthola i- € 1 MAHHALA
Uma ubhalisa kuhlelo lwe-TuLotero bese uthatha ithuba lokungena "Newsgadget" Ebhokisini "Nginekhodi" kokubhaliswa kuhlelo, Uzoba ne- € 1 ngokuzenzakalela ongayisebenzisa kuhlobo lwe-lottery oyifunayo ngoba izongezwa ngqo ku-akhawunti yakho yomsebenzisi. Ungakhohlwa ukufaka ikhodi yakho futhi usebenzise leli thuba eliyingqayizivele lokudlala ngokuphelele futhi ngaleyo ndlela wazi ngokujulile ulwazi ngeTuLotero.
Ngaphezu kwalokho, ngoLwesine oluzayo, ngoJuni 4, 2021 kukhona iBig Friday Super Jackpot entsha enama-euro ayizigidi ezingama-130 kumklomelo wokuqala. E-TuLotero bebevele benikeze umklomelo wokuqala walolu suku olukhethekile ngoSepthemba wonyaka odlule kusuka kokunye kokuphathwa kwe-500 okuhambisana ne-TuLotero, ikakhulukazi i-Administration 29 yeValladolid.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Aplicaciones » I-TuLotero yethula uhlelo lwayo olusha olulindelwe ku-Google Play